Mogadishu Journal » Dowladaha Soomaaliya iyo Shiinaha oo dib u dhisaya biyo Mareenada Caasimadda
Mjournal :-Maamulka gobolka Banaadir oo iskaashi ka helaya dowladda Shiinaha ayaa dhawaan qorsheynaya in dib u dhis lagu sameeyo goobihii biyo mareenada ahaa ee ku bur buray dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay.
Kulan gaar ah oo dhexmaray Guddoomiyaha Gobolka Banaadir iyo Saraakiil ka socotay Dowladda Shiinaha ayaa looga hadlay in dib u dayactir lagu sameeyo goobihii biyo mareenada ee Muqdisho,kuwaas oo hadda ah kuwo bur bursan.
Wadooyinka qaar ee Muqdisho ayaa xirma oo aan la isticmaalin xilliyada roobka uu ka da’o muqdisho taas oo ay dhibaato ku qabaan shacabka.
Xogheyaha guud ee Maamulka gobolka Banaadir Cumar Cabdirisaaq Xuseen ayaa sheegay in dhawaan qiimeyn lagu sameyn doono goobaha marin biyeedyada ah ee Muqdisho kuwaas oo burburay,isla markaana xiran.
Zidane oo si layaab leh isaga casilay shaqada Tababarnimo ee Real Madrid